सर्पदंशबाट कसरी बच्ने ? प्राथमिक उपचार के हुन्छ ? – Health Post Nepal
२०७६ असार १५ गते १०:५७
विशेषगरी असार, साउन, भदौ, असोज महिनामा सर्प जमिन बाहिर निस्कने गर्छन् । सर्पको टोकाइबाट तराई क्षेत्र बढी प्रभावित छ । तराईमा पाइने सर्पहरू धेरै विषालु हुन्छन्, जसको टोकाइमा उपचार गर्न सकिएन भने मानिसको तत्काल मुत्यु पनि हुने गर्छ । पहाडमा पाइने सर्प विषालु हुने भए पनि तक्कालै ज्यानै लिनेखालका हुँदैनन् । रगत खराब गर्ने, तन्तु तथा सेललाई बिग्रर्ने सर्प पाइन्छन्, जसलाई हर्रो तथा आदो भनेर स्थानीयले चिन्ने गरेका छन् ।
नेपालमा बर्सेनि हजारौँ मानिसको सर्पले टोकेकै कारण मुत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । ठूलो संख्यामा बिरामीको स्वास्थ्यसंस्थामा पुग्न नपाई मृत्यु हुने गरेको छ ।
पहाडिया सर्प सामान्यता असारबाट देखिन सुरु गर्छन् भने तराईमा जेठ महिनादेखि देखिन्छन् । तराईमा छिटो गर्मी हुने भएकाले पनि छिटो सर्प देखिन थाल्छन् । सर्पको टोकाइका बिरामी अस्पतालमा बिस्तारै बढ्दै गएका छन् ।
टेकु अस्पतालमा हेर्ने हो भने दैनिक सर्पको टोकाइका दर्जनौँ बिरामी आउने गरेका छन् । त्यसमध्ये महिनामा भर्ना भएर बस्नेको संख्या ८५–९० जना रहेको तथ्यांकले देखाउँदै आएको छ । सर्पहरूले आफू असुरक्षित महसुुस नहोउन्जेल मानिस वा जनवारलाई आक्रमण गर्दैनन् । मानिसले सर्पलाई हान्ने तथा खुट्टाले खुक्चिँदा सर्पले टोक्ने गर्छन् ।
सर्पले टोकेको बिरामी आउनेबित्तिकै अस्पतालमा पहिलो चरणमा रगतको स्याम्पल परीक्षण गरिन्छ ।
– सर्पले टोकेपछि मानिस साइकोलोजिकल्ली आत्तिने गर्छन् । तर, सर्पले टोके पनि सबै सर्पले विष निकाल्ने गर्दैनन् । झन्डै एकतिहाइ सर्पले विष निकाल्दैनन् । टोकेको भए पनि विष निकालेका हुँदैनन् । यो कुरा बिरामीलाई थाहा भएको खण्डमा मनोवैज्ञानिक असर केही कम हुन जान्छ ।
पहाडतिर घाँस–दाउरा गर्न जाँदा धेरै मात्रामा सर्पले टोक्ने गर्छन् । त्यस्तो वेलामा पनि विशेष सजगता अपनाउनुपर्छ । विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले झन्डै ६० प्रतिशत महिला सर्पको टोकाइमा पर्ने गरेका छन् । यसको प्रमुख कारण महिला बढी मात्रामा खेतीपातीमा सक्रिय रहने भएकाले टोकाइको दर बढेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।